Ireo fisehon'ny fifamoivoizana any Sri Lanka " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Mampiavaka ny lalana any Sri Lanka
Mampiavaka ny lalana any Sri Lanka
Toerana ankapobeny eny an-dàlana
Lalana kalitao ao Sri Lanka
Ireo mpampiasa lalana rehetra
Endrika fanamoriana lehibe ao Sri Lanka
Ny toe-javatra ankapobeny amin'ny lalana ao Sri Lanka
Na dia eo amin'ny Internet aza ianao dia mahita be dia be ny fiampangana fa feno fifamoivoizana tanteraka ny fifamoivoizana eto amin'ity firenena ity, manjaka ny korontana eny amin'ny arabe, ka ny lozam-pifamoivoizana dia mampidi-doza amin'ny ankapobeny, raha ny marina, ny zavatra rehetra dia tsy malahelo be.
Ny lafiny lehibe voalohany dia ny fivezivezena ankavia. Ny mitondra fiara amin'ny ilany havia dia misy andinindininy manokana. Fa ny mpamily tsirairay izay mahatsiaro ho matoky tena rehefa mitondra eo ankavanana dia afaka mandeha ho azy tsy misy fahasahiranana firy amin'ny familiana amin'ny ankavia.
Karazana mitondra fiara eo an-toerana
Ny sasany amin'ireo fahazarana mitondra fiara any an-toerana dia toa feno herisetra amin'ny voalohany. Ohatra, ny fahazoan-dàlana dia eto, miaraka amin'ny fandaozana ny iray ho avy amin'ny toe-javatra iray raha ny fiara mandeha amin'ny lalana ho avy dia tena akaiky ilay iray tampoka. Mandritra izany fotoana izany, dia vonona amin'izany ny rehetra. Fiara (na fitaterana hafa) mivezivezy amin'ny lalana ho avy dia vonona amin'ny fotoana rehetra hihodina miankavia amin'ny sisin'ny lalana. Ny antony tsy izany dia tsy fahatafintohinana manokana ataon'ireo mpamily Sri Lankan, fa ny fahateren'ny lalana ao an-toerana sy ny fitomboan'ny fifamoivoizana. Ny fandehanana amin'ny fomba hafa dia matetika tsy azo atao tsotra, ary be ny fitaterana miadana (na dia somary miadana loatra aza indraindray).
Maro ny mpamily nitondra fiara tamim-pitiavana nanohana ny sisiny teo ampitan'ny arabe mba handalovan'ireo fiara mandeha aoriana. Ny ankamaroan'ireo mpamily dia mihodina famantarana mandritra ny làlambe iray.
Ny hafainganam-pandehan'ny tanàna dia voafetra ho 50 km / ora, amin'ny làlambe tsotra - 70 km / h, amin'ny làlambe - 90 km / ora. Tsy fahita firy ireo mpanafika eny amin'ny làlambe, ary ny ankamaroan'ny lalana dia tsy midika ho fanafainganana be loatra. Amin'ny ankabeazany, ny fitaterana eo an-toerana dia tsy mampiavaka ny hery lehibe sy ny dinamika. Matetika mihoatra ny hafainganam-pitaterana hafa, ny bisy sy ny kamio mihoatra ny hafainganam-pandeha azo ekena.
Inona ireo lalana any Sri Lanka
Namboarina tsara ny tamba-jotra eto amin'ity firenena ity. Betsaka ny làlan-kaleha, ny ankamaroan'ny lalana dia kely sakantsakana, misy lalana tokana isaky ny lalana. Mandritra ny fifamoivoizana mahery vaika dia mihena ary mitondra amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Ny halavan'ny masony dia amin'ny kalitao ara-dalàna, ny gorodona dia manify na aiza na aiza, tsy misy voanjo. Izany koa dia mihatra amin'ny làlana aspalety. Saika isaky ny lalana lehibe dia misy ny marika izay hita mazava tsara.
Colombo sy ny seranam-piaramanidina. Ny Bandaranaike dia mifandray amina lalambe maoderina avo lenta, izay mamela vetivety eo dia miala eo amin'ny seranam-piaramanidina ka hatrany an-drenivohitry ny firenena ary miainga mankany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Mandoa ity làlana ity, 300 rupees Sri Lanka (izay mitentina 1,65 $ fotsiny) no omena alalana handehanana an-tseranana mankany Colombo.
Matetika no tery ny làlambe. Any amin'ny toerana tsy misy mihitsy. Mandritra ny fitsangatsanganana miaraka amin'ireo fiara tsy ho ela dia hiainga, dia mila misintona eny amoron-dàlana ianao, mampihena ny hafainganam-pandehany.
Lalan'ny arabe ary indraindray ny lalana dia toy ny sisin-dàlana ho an'ny mpandeha an-tongotra. Betsaka ny lalana maloto eto amin'ity firenena ity, na izany aza, na dia any amin'ny toerana be mpizahatany malaza aza dia mivoatra tsara ny tamba-jotra asfalt. Mila miverina amin'ny lalana tsy voaloa ianao raha te hiala amin'ny làlan-dàlana lehibe mba hijery zavatra tsy hojerena taloha.
Ny làlambe an-tendrombohitra dia miompana indrindra amin'ny afovoan'ilay nosy. Bibilava mideza izy ireo miaraka amin'ny endri-javatra mampiavaka ny làlan'ny sankankaney - tery, tsy misy soroka, rakotra tsara. Mbola mihisatra aza ny fifamoivoizana amin'ireny lalana ireny ary sarotra kokoa ny mahita azy.
Vao tsy ela akory izay, ny làlamben'ny tolotra be kalitao napetraka any Sri Lanka (avy amin'ny seranam-piaramanidina Bandaranaike ka hatrany Colombo, hatrany Colombo ka hatrany Galle, sns.). Na izany aza, làlana tery tsy mahazo aina no manjaka eto amin'ity firenena ity, manana lalana iray monja amin'ny lafiny roa; amin'ny toerana maro dia tsy misy sisin-dàlana. Saingy, amin'ny làlam-pizahantany lehibe, ny kalitaon'ny arabe dia zaka. Misy marika ampy, ny tsirairay amin'izy ireo dia misy fandikan-teny anglisy, ary mazava foana ny fanamoriana ny lalana. Ny tsipika fotsy eo akaikin'ny sisin'ny arabe dia midika fa ajanona ny fijanonana sy ny fijanonana ary ny tsipika mavo dia midika fa voarara izany. Ny fiampitana mpandeha an-tongotra tsirairay dia asehon'ny tsipika mavo miampita, ary ny tsipika zigzag amin'ny arabe dia manondro ny fomba hanatonana azy io.
Ireo mpampiasa lalana any Sri Lanka
Ny mpilalao lehibe indrindra amin'ny fivezivezena eny amin'ny araben'i Sri Lanka dia bisikileta, fiara, tuk-tuk, bisy samy hafa habe, kamio, olona, ​​ary koa biby maro, na ny wild na ny domestic.
Eo afovoan'ny làlana hihaona amin'ny mpandeha an-tongotra iray any Sri Lanka dia tsy ho vita izany. Saingy, misy maro amin'izy ireo amin'ny sisin-dàlana. Any amin'ireo tanàna kely, izay masiaka amin'ny làlan-dàlana dia matetika tsy tsy eo amin'ny sisin-dàlana. Ny olona dia mila mizotra amin'ny arabe tery. Rehefa latsaka ny haizina dia mihena ny isan'ny olona fa ao izy amin'ny alina. Tsy misy mitafy fitafiana misy singa hita taratra any Sri Lanka. Mila mitandrina ianao, manara-maso tsara ny sakana. Tena manan-danja indrindra any amin'ireo faritra be tendrombohitra izay miorina amin'ny làlan'ny bibilava.
Tsy avela eto mihitsy ny olona eny amin'ny arabe - na dia ny fiampitana mpandeha an-tongotra aza. Efa zatra izany ny mpandeha an-tongotra. Raha mijanona ianao mba hamela ny olona handalo, dia, ankoatry ny mpandeha an-tongotra ihany, ny fihetsikao dia tsy ampoizina ho an'ireo mpamily izay manaraka anao avy hatrany. Hieritreritra izy ireo fa hijanona noho io antony io fa tsy mitombina. Ny daroka avy any aoriana dia tena azo inoana.
Ny zavatra rehetra etsy ambony momba ny olona dia azo lazaina momba ny mpitaingina bisikileta, anisan'izany ny tsy fahampian'ny taratra, ary koa ny vanimpotoana lehibe ary tsy dia tsara ny ankamaroan'ny bisikileta. Na izany aza, mbola mifindra eny amin'ny arabe ihany ny bisikileta fa tsy eny an-dalambe.
Eto amin'ity firenena ity dia maro, na dia somary vitsy noho ny any Thailandy ary na ny any akaikin'i India aza. Matetika ny mopeds sy scooter kely dia mahazatra. Ny mpitondra môtô feno feno dia kely kokoa.
Ity no malaza indrindra amin'ny maody fitaterana rehetra any Sri Lanka. Izy io dia afaka manompo ho toy ny fomba fitaterana manokana sy ho an'ny daholobe. Amin'ny tuk-tuk koa matetika dia mitondra fitsangatsanganana sy ny entan'ny fitaterana.
Sri Lanka dia manana fari-piainana ambany dia ambany, noho izany dia tsy ampy ny fiara eto. Na fiara manokana tsy lafo aza tsy takatry ny maro. Ny ankamaroan'ny fiara misy dia Japoney, Koreana ary Sinoa. Misy fiara Eoropeanina sy Amerikanina vitsy kokoa.
Ity dia fomba mahazatra amin'ny fomba fitaterana any Sri Lanka. Izy io dia minibus no fiara voalohany amin'ny fitsangatsanganana mpizahatany.
Manana ny lazany izy ireo ho toy ny fitaterana "mahatsiravina" faran'izay betsaka amin'ny arabe skankana. Avelany ny tenany izay tsy zakan'ny mpampiasa lalana amin'ny arabe sankilany.
Ireo mpampiasa lalana feno làlana amin'ny làlana Sri Lankan dia. Matetika ny alika dia mandry eo amoron'ny arabe. Mitazona fitovian-jo izy ireo mandritra ny fomba fitaterana, tsy misy hifindra na aiza na aiza, ka mila mihodina. Raha tsy misy ny mety hisafoana làlana dia mijanona ho manakaiky ny alika ihany ary manome famantarana maharitra.
Ho an'ny alika, misy omby sy omby hafa. Mikasika ny bibidia, ny mongôzy ary ny mpitsikilo lehibe, izay matetika miampita ny arabe dia matetika eny an-dalana. Ny fauna Sri Lankan dia azo antsoina hoe manankarena tokoa. Eny an-dàlana eto matetika dia mahita famantarana izay mampitandrina ny amin'ny mety hisian'ny biby mipoitra amin'ny faritra akaiky indrindra amin'ny lalana, ao anatin'izany ny voay, na izany aza, dia tsy mihazakazaka mankany amin'ny lalana matetika.
Betsaka ny polisy eto. "Polisy fifamoivoizana" eo an-toerana no hita hatraiza hatraiza. Noho izany, mankany ambadiky ny kodia dia mila mailo ianao fa misy ny mety hisakanan'ny polisy anao.
Ny polisy Sri Lankan dia mora ekena noho ny fanamiany sy ny fonon-tsoany.
Amin'ny toerana be na lehibe kokoa, ny paositry ny polisy misahana ny fifamoivoizana dia hita saika amin'ireo fihaonan-dàlana feno fivezivezena feno olona. Any ivelan'ny tanànan'ny "polisin'ny fifamoivoizana" any Sri Lanka dia misy koa ny ranomasina. Ny fisafoana 100 dia hita amin'ny halavirana 5 km. Any amin'ny tanàn-dehibe, mifehy ny fifamoivoizana indrindra izy ireo, ary amin'ny lalana amoron-tsiraka dia mipetraka amina otrika izy ireo, mampiasa radara hisamborana ireo meloka.
Mandoa onitra eny an-dalamben'i Sri Lanka
Ny onitra amin'ny haingam-pandeha dia avy amin'ny 1 Rs. Fandehanana mamo - 000 5 ropia. Ho an'ny fiara mandeha amin'ny jiro mena - 000 rupees. Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny olana dia azo vahana amin'ny fanontaniana hoe "Ohatrinona?" ary ny sandan'ny vola 8 000 ropia. Aleo ihany omanina mialoha ny vola hanaovana kolikoly ary tazomy ho tsy mitovy amin'ny vola sisa tavela, mba tsy hamitahana ilay polisy, raha tsy izany dia hitaky zavatra bebe kokoa izy.
Raha ny marina dia eo ny rafitra sy ny lojika. Ary tsy miankina amin'ny habetsahan'ny famantarana anao izany. Ary rehefa takatray izany, ny hetsika any Sri Lanka dia hita fa azo antoka sy milamina.
Amin'ny fomba fiasa rehetra. Ohatra ny fisongonana tafahoatra. Ny bip fohy dia novokarina, mba hanazavana fotsiny fa eto ianao ary izay tianao ho tsikaritra. Famantarana fohy ary mandehana am-pahasambarana hanatratra.
TSY MISY liana amin'izay nitranga ny loza. Sri Lanka dia firenena misy olona tsara toetra izay tsy te-hanao ratsy amin'ny fanahy iniana!
Tokony ho takatra fa ny bisikileta no fiara azo ovaina indrindra eny an-dalana. Ary izany no antony, indraindray toa tsy miraharaha azy ireo eny an-dalana izy ireo. Raha ny marina, ireo mpampiasa arabe hafa dia resy lahatra fa afaka mizaka ny toe-javatra rehetra ny bisikileta. Rehefa mihazakazaka mamaky ny valan-javaboary ianao dia tsy dia mieritreritra ny fisidinan'ny fody eny amin'ny lalanao. Resy lahatra ianao fa hanao zavatra tsara ry zareo rehefa mandroso aminy ianao. Toy izany koa amin'ny bisikileta. 🙂
Ary koa, saika ny fiara rehetra dia manana fitaratra fanampiny ao amin'ny faritry ny hood. Ireo fitaratra ireo dia napetraka manokana mba hanomezana fahitana fanampiny an'ireo teboka jamba izay matetika voadona bisikileta kely.
Ny famantarana ny fiara ao Sri Lanka dia miavaka amin'ny feo ihany koa. Izany hoe, ny karazana fiara tsirairay dia samy manana ny famantarana azy manokana. Amin'ny signal, dia azonao atao avy hatrany hoe fiara fitateram-bahoaka, fiara mpandeha, SUV, kamio na bisikileta no manome an'io famantarana io. Mampiroborobo ny fahatakarana ny toe-javatra fivezivezena koa izy io.